Mabhuku makumi maviri anotengesa zvakanyanya ezana ramakumi maviri nemasere | Zvazvino Zvinyorwa
Patinobvunza mabhuku anotengeswa zvakanyanya munhoroondo isu tine kunzwa kwekusawana akawandisa vanotengesa zvakanyanya rakabudiswa mumireniyumu itsva. Nekudaro, kana isu tikaunganidza kubva pano kuenda uko, ongorora mafambiro uye nekuvimba iyo data, kune zvakawanda kupfuura zvatinofunga.
Iwe uchawana kushamisika kusinganzwisisike, senge iro chete bhuku reSpanish pane iri runyorwa. Ehe, hongu, tarisa rondedzero ye iwo makumi maviri mabhuku anotengesa zvakanyanya ezana ramakore rechi20.
Rowling naBrown vanobatana maoko
Mabhuku anotengesa zvakanyanya munhoroondo, Iyo quran (Mamirioni mazana matatu) uye Bhaibheri (Mamirioni mazana maviri nemakumi mashanu), anoramba asingakundike mune runyorwa urwo Don Quixote achiri kumirira kuwanda kwemakopi ayo, sekureva kwevazhinji, anogona kumuita bhuku rinotengesa zvakanyanya munhoroondo.
Nekudaro, uye apo TOP yemabhuku anotengesa zvakanyanya iri kubuda, ngationgororei anga ari iwo vanotengesa zvakanyanya yemireniyumu itsva. Rondedzero umo kushamisika kusiri kushayikwa, kumwe kufungidzira kunosimbiswa uye isu zvakare tine yakasarudzika Spain kuvepo
Iyi ndiyo nhanho:
Iyo Da Vinco Code, naDan Brown (2003): 65 mamirioni.
Harry Potter uye Hafu-Ropa Muchinda, naJK Rowling (2005): 55 mamirioni.
Harry Potter uye iyo Order yePenieni, naJK Rowling (2003): 55 mamirioni.
Harry Potter uye iyo Goblet yeMoto, naJK Rowling (2000): 55 mamirioni.
Harry Potter uye iyo Inouraya Hallows, naJK Rowling (2007): 50 mamirioni.
Ngirozi neMadhimoni, naDan Brown (2000): mamiriyoni 39.
50 shades ye grey, naEEL James (2011): 31 mamirioni.
Chiratidzo Chakarasika, naDan Brown (2009): mamiriyoni 30.
Hupenyu hune chinangwanaRick Warren (2002): mamirioni makumi matatu.
Twilight, naStephanie Meyer (2005): mamirioni 30. *
Millenium: Musikana ane Dhiragi Tattoo, kubva kuna Stig Larsson (2005): mamirioni makumi matatu.
Iyo Nzara Mitambo, naSuzanne Collins (2008): mamiriyoni 23.
Wolf Totem, naJiang Rong (2008): mamiriyoni makumi maviri.
ChakavanzikanaRhonda Byrne (2007): mamirioni makumi maviri.
Pasi penyeredzi imwe chete, naJohn Green (2012): 18.5 mamirioni.
Mumvuri weMhepo, naCarlos Ruiz Zafón (2001): mamirioni gumi nemashanu.
Kubva kudenga kwangu, naAlice Sebold (2002): mamirioni gumi.
Makomete mudenga, kubva Khaled Hosseini (2003): mamirioni gumi.
Chikafu cheDukan, naPierre Dukan (2000): mamirioni gumi.
hupenyu hwaPi, naJann Martel (2001): mamirioni gumi.
* Cherekedza: inofanirwa kujekeswa kuti dhata yega yega yeTwilight saga yanga ichinetsa kuwana, saka uchifunga kuti saga yakazara yakapfuura mamirioni zana emakopi uye vhoriyamu yekutanga ndiyo yakatengeswa zvakanyanya, huwandu uhu hwaratidzirwa kutungamira .
Izvi Mabhuku makumi maviri-makumi maviri anotengesa zvakanyanya zvinosanganisira, zvisingaite, JK Rowling naDan Brown kutora runyorwa, kuwedzera kune iyo isinganzwisisike (yakakodzera) kushamisika.
Mukutanga kwa2016, Musikana paChitima Yakanga yaunganidza mamirioni mashanu, saka tichifunga nezve hupenyu hwayo hupfupi mumusika, mumakore mashoma (kana mwedzi) tinogona kuwana zita idzva pachinzvimbo.
Nezve iro zita rakasimudzwa isu tinogona kungoti Bravo Zafón!
Nderipi bhuku rakaburitswa mumakore gumi nematanhatu apfuura aunofunga kuti rinofanira kunge riri pane urwu runyorwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku makumi maviri anotengesa zvakanyanya ezana ramakumi maviri nemasere
Ndakaverenga hafu yemabhuku, nerondedzero iyi ini ndatova kunzwa zviri nani zvishoma. Kutsvoda
Yakakwana rondedzero yekuziva iyo inotyisa kuravira kwemakwai mukanyiwa
Muahahaha .. Ndozvandaifunga
Pindura kuna Aletheia
Gladys Medina. akadaro
Iwe unofanirwa kuve unoshivira kune mumwe kuravira! uye kana zvichibvira, tsvaga rondedzero kubva kuraibhurari yako yandinofunga kuti inyanzvi mune zvedzidzo kana zvehungwaru.
Pindura Gladys Medina.